4 calaamadood oo lagu garto dadka beenta sheega
Home Muraayad 4 calaamadood oo lagu garto dadka beenta sheega
Walwalka ka muuqdo waa calaamad been!
Beenta waa xaaraan, beenta dadka sheegana lama jecla. Beenta wax unbey kharibtaa mooyee waxba ma toosiso, sidaa darteed bulshada waxay ka wada siman yihiin in beenta laga fogaado carruurtana lagu barbaariyo in beenta ay tahay wax aad u xun.
Balse, iyadoo beenta laga soo wada horjeedo, hadana nolosha waxay dad badan ku kaliftaa in ay sheegaan Been.
Halkaan waxaan idiiinku soo gudbinaynaa afar sheey ama calaamadood oo kuu sahlaya in aad ku garato qofka beenta sheegaya.
Waxay muujiyaan calaamado walaac ah
Dadka badanaa qiimeeya runta iyo daacadnimada waxaa ku adag sheegidda beenta weyn, taasoo jir ahaan u keenta culeys faro badan. Haddii ay calaamadahaas raaciyaan hadallo ama sheeko aadan ku qancin sababinteeda, waxaa suuro gal ah in qofkaasi uu kuu sheegayo been.
Khabiir Roger oo falanqeeya dabeecadaha ayaa sheegay in walaaca beenta uu ka duwan yahay walaacyada kale. “Walaaca uu muujiyo qofka beenta sheegaya waxaad ku garan kartaa qofka oo boobaya neefta ama dhidid deg deg ah ka yimaado, ama taataabanaya wajiga ama dhaqdhaqaajinaya lugaha ama gacmaha.”
Waxay sheegaan macluumaad aad u faro badan ama aad u yar
Waxaa caado ah in qofka beenta sheegaya uu ilaaliyo ama xaddido hadallada afkiisa ka soo baxa asaga oo uga dan leh in mustaqbalka dhow ama fog su’aalo badani uga imaanin arrintaas.
Laakiin khubarada ayaa sidoo kale sheega in dadka beenta sheegaa ay badiyaan hadalka si ay u muujiyaan inay kalsooni leeyihiin. ‘’Hadii qof kula wadaagayo macluumaad tiro badan, macluumaad iyo faahfaahin aadan adiguba weydiisan, waxaad ogaataa fursada ah in qofkaasi been kuu sheegayo ay aad u sarrayso’’ Waxaa sidaa tiri khabiir lagu magacaabo Lillian Glass oo falanqeeysa dabeecadaha mar ay la hadashay Bogga Business Insider.
‘’Sababta dadka beenta sheega ay u badiyaan hadalka ayaa ah in ay aaminsanyihiin in hadalka badani uu qofka u ekeysiiyo in uu fur furanyahay iyaga oo ka rajaynaya in waji furnaanshaha ay u sahasho in dadka ay aaminaan. Waxaa sidaa tiri Lillian Glass.
Waxay durbadiiba joojiyaan dhaq dhaqaaq oo dhan
Sheegidda been aan kalsooni lagu qabin in la rumeysto waxay qofka ka qaadaa deganaanta. Balse dadka qaar ayaa sheega beenta iyaga oo dhamaan joojiya dhaq dhaqaaqa jirkooda.
‘’Dhaqaaq la’aanta noocaas ah markuu muujiyo qofka beenta sheegaya waxay ka dhigantahay in maskaxda ay isu diyaarineyso iska horimaad ama dagaal inuu durbadiiba meesha ka dhaco.’’ Lillian Glass ayaa tiri. Waxay sidoo kale sii raacisay, hadii qof been sheegaya lagu qabto oo uu joojiyo dhaqaaqa dhan ood aragtid qof meesha sidii ul la taagay u suran, waxaad ogaataa in ay tahay calaamad weyn oo ah in qofkaasi dagaal isu diyaariyay.
Waxay tilmaamida gacanta isticmaalaan hadalka kadib.
Waxaan wada ognahay badanaa dadka qaar marka ay hadlayaan in ay gacmahoodana isticmaalaan marka ay gudbinayaan macluumaadka ay sheegayaan iyagoo u isticmaalo in ay wax ku tilmaamaan ama wax ku muujiyaan.
Balse dadka beenta sheega ayaa sameeya ficil ka duwan kaas oo ah in tilaamida gacanta ay ka dambeyso hadalka ay dhahaan. Waxaa sharaxaad ka bixiyay sababtaas khabiir lagu magacaabo Traci Brown. Waxay tiri, ‘’Qofka markuu sheegayo beenta, maskaxdiisa way mashquulsantahay, waxayna ka fikiraysaa hadalada ay alifayso in la aamini karo iyo in kale iyada oo mar walbo macluumaad dheeri ah soo saaraysa sidaa darteed maskaxdo oo aad u mashquulsan ayaa sababaysa in hadalka iyo tilmaamta gacmaha ay isla socon waayaan oo hadalka kasoo hor maro tilmaamta.’’
Hadii aad aragto qof markuu hadlo kadib sii dhaqaajinaya gacmaha, waxaad ogaataa qofkaas in uusan sheegeynin hadal xaqiiq ah.
Previous articleToddobadan arrimood caadeyso maanta laga billaabo
Next articleNinkeyga faa’iido malahan… ma ogola shaqada guriga
COVID19 iyo awoodaha baasaboorada Geeska Africa. Yaa hadda ugu sarreeya?